OoVimba be-BDP-Funda ukuRhweba
IProtokholi yeDatha enkulu ibona iSurge yoKwamkelwa kwabaNtu kwi-DeFi Frenzy yamva nje
Ukuhlaziywa: 8 Matshi 2021
Ngeepesenti ezi-6.1 nezine zamanani ezivuno zonyaka, iBig Data Protocol (BDP) sele iyintetho yokugqibela edolophini kwicandelo le-DeFi, njengoko inani elipheleleyo lomgaqo-nkqubo liye lafikelela kwi-XNUMX yezigidigidi kwiintsuku nje ezimbini emva kokuba kuphehlelelwe .
Umgaqo-nkqubo we-DeFi ubhengeze ukumiliselwa kwawo ngo-Matshi 6 ukuba i-100% yonikezelo olujikelezayo lokuqala-eyi-30% yonikezelo olupheleleyo lwethokheni ye-BDP-iya kusiwa eluntwini ngaphezulu kweentsuku ezintandathu. Le projekthi ixhaswa liqela leetekhnoloji, abatyali mali be-crypto, kunye neenzululwazi zedatha kwaye ziyilelwe ukukhuthaza ukumba umgodi kwixesha elizayo.
Kukho amachibi aliqela okuhlawula amatyala ngee-asethi ezilishumi elinesibini ze-DeFi, ezifumene isibambiso esibalulekileyo kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo. Nangona ulimo lwesivuno lunokuvelisa imbuyekezo ebonakalayo, abanokuba ngabatyali mali bayacetyiswa ukuba bahlolisise umngcipheko obandakanyekayo ukumisela ukuba yinto abanokumelana nayo na.
Ngaphezulu kwe-1,000,000 ETH ifakwe kwi-Ethereum (wETH) esongwayo esekwe kwiingxelo ezivela kwigumbi ledatha ye-BDP, ibeka umvuzo wayo we-APY kwi-40%. Phantse i-17,000 ye-BTC ikwi-pool ye-Bitcoin (wBTC) esongelwe nge-APY yokufumana i-82%, ngelixa i-Tether vault ikhule nge-728 yezigidi ze-USDT.
Okwangoku, amachibi afumana umvuzo ophezulu athumela imbuyekezo enamanani ama-4 kunye ne-OCEAN kwi-1,375% kunye neTOMOE kwi-1,315%.
Iposti yebhlog ichaze ukuba:
Abasebenzisi babonelela ngemali ukuze bafumane i-BALPHA ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Amathokheni edatha alandelayo, abizwa ngokuba yi-BBETA kunye ne-bGAMMA, aza kuphehlelela emva kwe-BALPHA, eya kuthi inyuse ukwanda kwemali. ”
Iposti yongeze ukuba inxenye ye-BDP kunye neethokheni zedatha ziyatshiswa njengoko ukwamkelwa kweProtocol kunye nendawo yentengiso ikhula ngokuhamba kwexesha.
Ukuhanjiswa koNikezelo lweMiqondiso
Okwangoku, ukuhanjiswa kweethokheni ezizizigidi ezingama-80 kuya kusasazwa ngale ndlela: iipesenti ezingama-30 ziya kusasazwa kwintsuku ezintandathu zokuqala zokukhuthaza ukulima, i-35% izakwabelwa iinkqubo zokufumana umvuzo wexesha elizayo, iipesenti ezingama-25 ziya kugcinwa. kwi-ecosystem, kwaye i-10% iya kwiqela kunye nabacebisi.
Ithokheni yedatha ye-BALPHA inezinto ezikhoyo ezingama-18,000 kuphela, eziza kwabelwa imbuyekezo yokumbiwa kwemigodi.
tags BDP, Cryptocurrency, Defi